Hem / Xaqaaga iskoolka	/ Taas waan kaa caawin karnaa	/ Helena waa kormeere iskool
Magaceygu waa Helena waxaana ahay kormeere iskool. Taa macnaheedu waxey tahay in aan u safro dhamaan iskoollada waddanka si aan u ogaado in ay ardayda helaan waxbarashada ay xaqa u leeyihiin.
Waxaan ka shaqeeyaa xafiiska kormeerayaasha iskoollada ee Lund, marka badanaa waxaan joogaa iskoollada ku yaalla gobollada koorfureed ee dalka, Halland, Blekinge, iyo Småland. Kormeerayaasha iskoollada waxey xafiisyo ku leeyihiin wadanka Iswiidhan oo dhan.
Maxaan iskoolaadka ka kontaroolnaa?
Marka aan iskool imaado waxaan fiiriyaa shahaadada ay ardayda heestaan iyo iskoolka natiijadii uu ka helay imtaxaan weynihi wadanka oo dhan. Waxaa kale oo aan sameynaa suaalo weydiin ardayda, waalidka iyo macalimiinta si aan u aragno ra'yiga ay ka qabaan iskoolka. Waxaan kale oo aan la hadlaa maamulaha.
Booqashada waxey noqonkartaa sida tan
Waxey noqon kartaa in aan aadayo iskool weyn oo ku yaala magaalo yar. Booqashada ka hor waxaan ogaaday in ay ardayda dhigataa fasalka sagaalaad kala bar ay shahaado ka qaataan maadada muusikada, inta ay dhamaana shahaado ka helaan maadooyinka kale. Marka waa wax xiiso le in la ogaado sababta aysan ardayda ugu baasin maadada muusikada iskoolkaa weyn oo dhan. Marka si aan u ogaano waxaan booqaneynaa xisadaa muusikada oo wareysi la yeelaneynaa ardayda iyo macalimiinta. Markaa waxaan aragnay in uusan iskoolku haysan macalin muusig oo ay macalimiin kale ay iska dhigaan xiisadaa. Waxa kale oo ka maqan qalab muusig, gitaaradona wey jajabeen, markaa wax qalab ah oo lagu ciyaaro oo isku daba ridaya muusigada maba yaalaan. Aradaydu waxey sheegeen sidaa darteen in aysan xisado xiiso aysan leheen oo ay badanaa ay iska fadhiyaan oo ay heesaan xisada oo dhan. Macalimiintuna waxa ay sheegeen in aysan ka gaarin in ay xisad muusig oo fiican in ay dhigaa maadaama ay isku taxalujinayaan maadooyinkooda caadiga ah.
Waxaan hubinaa in uu iskoolku jabinayo wax sharci ah
Marki aan iskoolka booqano ka dib waxaan qiimeynaa hadii uu iskoolka jibinayo wax sharci ah. Hadii aan argno markaa waxaan u qoreynaa goaan. Goaankaa waxaa ku qoran sababta uu qaladku yahay iyo in uu maamulaha iyo iskoolkuba ay saxaan qaladkaa. Goaanki aan iskooli weyna ka gaarneyna waa in ay qasab macalin muusig ay u helaan. Waxaa kale oo qasab ah in ay qalab muusig ay fasalka u taalo. Markaa ka dib waxaan siinaa iskoolka waqti uu waxaa ku xaliyo. Waa in ay qoraal ahaan ay usoo diraan wixi ay sameeyeen si aan markaa u booqano oo aan ula hadalno ardayda iyo macalimiinta mar kale. Taa waxa ay tahay aan hubsano si ay ardayda ay u jeclaadaan xisada muusigada.
Ma kontaroolno cuntada iskoolka
Ma fiirino markasta suaalaha ay ardaydu u arkaan muhiim. Tusaale ahaan badanaa waxay rabaan in aan qiimeyno cuntada iskooolka. Laakiin waxaan fiirina waxa kaaga muhiimsan adiga ardayahaan oo aad ka faaideyso waxtigaaga iskoonla sida ugu macquul ah. Cilmi baaristo waxay leedahay tusaale ahaan in wax laga qabto daganaasha waxbarashada, iyo sida uu macalinka u shaqeynayo xisada dhexdeeda. Cuntada iskoolka waa muhiim lakiin ma ahan waxa ugu muhiimsan.
Badanaa sifiican ayay iskoolaadku u shaqeeyaan
Badanaa way fiicanyihiin iskoolaadka aan imaano, hadii xataa aan ka helno waxyaabo qaarkood oo saas u fiicneyn. Waxa ugu dhibka badan shaqadeyda waa marki aan iskool imaano oo ay ardaydo wax fiican heysan. Markaa waan ka xumaadaa markaa guriga imaado.
Mararka qaar go'aan wuu adkaan karaa
Hadii aan aragno in ay dhibaato iskool ka jirto waxey qaadan kartaa waqti dheer inta aan goaan keena ka dhameyneyno qorintiisa. Mararka qaar waxaa ka xumaada goaanka aan qornay ardayda iyo macalimiintuba. Badanaa ardaydu wey jecelyihiin iskoolkooda, in kasto aysan fiicneyn. Ardaydu waxaa gali kara welwel marki iskoolkooda lagu soo qoro jaraaidka. Waxa kaliya ee aan isku sasabaa waxey tahay in aan arkay in waqtikasta oo dhib badan eey ka danbeyso waqti aad ugu fiican jiritaanka ardayda. Taana waa marka eey dadka mas'uulka haaya eey xalliyaan wixii qaldanaa.